फ्यानसँग फोटो खिच्दै गर्दा तीनपटक ‘ब्याड टच’ गरेपछि थप्पड हानेँ, पछि आफै रोएँ - Mitho Khabar
May 31, 2022 mithokhabarLeaveaComment on फ्यानसँग फोटो खिच्दै गर्दा तीनपटक ‘ब्याड टच’ गरेपछि थप्पड हानेँ, पछि आफै रोएँ
काठमाडौं । नायिका मिरुना मगरले आफूलाई दु,र्व्यवहार गरेको भन्दै एक युवा भिक्षुलाई प्रहरी हिरासत पुर्‍याएपिछ चर्को प्रतिक्रियाहरुको सामना गरिरहेकी छन् । धेरैले उनको भनाइमा विश्वास गरेका छैनन् र उनले निर्दोषलाई फसाएको आ,रोप लगाएका छन् ।
यही सन्दर्भमा एउटा भिडियो पनि भाइरल भइरहेको छ । उक्त भिडियोमा हलबाट भीडभाडमा अन्य दर्शकहरुसँगै कबड्डी ४ का कलाकारहरु निस्किएको देखिन्छ । उक्त भिडियोमा मिरुना र आरोपी भिक्षु केही दूरीमा छन् । नायिकाको शरीरमा उनले हात पुर्‍याएको देखिँदैन । यही भिडियो हेरेर धेरैले भिक्षु निर्दोष रहेको बताइरहेका छन् ।
तर, मिरुनाको भनाइअनुसार घटना भएको हलबाट निस्किसकेपछि हो । हलबाट निस्केर फ्यानहरुसँग फोटो/सेल्फी खिच्दै गर्दा ती व्यक्तिले आफ्नो शरीरमा पछाडिबाट तीनपटक बलियो गरी समातेको उनको भनाइ छ । युट्युव च्यानल ‘रमाइलो छ’ मा हिजो दिएको अन्तर्वार्तामा मिरुनाले घटनाबारे यसरी वर्णन गरेकी छन्ः ‘यति धेरै भीड थियो । हामी सेल्फी खिचिरहेका थियौं फ्यानहरुसँग । भीडमा छुने भइहाल्छ भनेर धेरैले भनिरहनुभएको छ मलाई । तर, त्यस्तो होइन ।
म सुरुमा उभिइरहेको थिएँ र अगाडि फर्केर फ्यानहरुसँग फोटो खिचिरहेको थिएँ । त्यतिबेला मलाई पछाडि लेफ्ट बटममा (कसैले छोएको) फिल भयो । अलिकति हच्किएँ र अगाडि सरेँ । सुरुमा त होइन होला भन्ने भयो । फेरि सेकेन्ड चोटि अझ बढी टच भयो । तैपनि होइन होला जस्तो भइरहेको थियो । पब्लिक स्पेसमा त्यसरी हुन्छ भन्ने सोचिँदैन । त्यसमाथि फ्यानहरुले सर्कल गरेका थिए ।
तर, थर्ड चोटिमा सार्‍है पक्रेर, पिन्च नै गरेर। स्क्वीज (हातले निमोठेको इशारा गर्दै) गर्‍याे । अहिले पनि सोच्दा फिल हुन्छ । मेरो बडीको फर्स्ट रियाक्सन चाहिँ । फर्केर एक स्ल्याप (थप्पड हानेको) गरेँ । मोंक (भिक्षु) को भेषमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो देखेपछि अझै रिस उठेर आयो । म स्वयं पनि बुद्धिष्ट हो । यस्तो मान्छेले गर्न सक्छ र ? भन्ने भयो । अनि मेरो हात रोकियो ।
हेर्दा एकदमै सानो भाइजस्तो देखिन्छ । हामीले आफ्नै दाजुभाइलाई पनि सिकाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले मैले सबैको अगाडि उसलाई कराएँ । त्यतिबेला म कलाकार र ऊ भिक्षुभनेर होइन, एउटा केटाले म एउटा केटी मान्छेलाई हात लगाएकोमात्रै कुरा थियो । मैले उसलाई गाली गरेको क्लीपहरु पनि होला । यस्तो युनिफर्म लगाएर नचाहिने काम गर्ने ? युनिफर्मकै इन्सल्ट भइरहेको छ भनेर औंला ठड्याएर गाली गरेँ । उसले कान समात्यो ।
त्यहाँपछि मलाई लाज फिल भयो । सबैले रेकर्ड गरिराख्नुभएको थियाे । बाहिर गएर रोएँ । कस्तो कमजोर फिल गरेँ आफूलाई । मैले एक्सन त लिएँ । तर, संवेदनशील फिल गरेर बाहिर गएर रोएँ । एकछिन शान्त भएर सोच्दा आफूलाई सही भएन भन्ने भयो । पछि त्यो मान्छे आनन्दले हाँसेर हिँडिरहेको देखेपछि चित्त बुझेन । कानूनको सहायता लिनुपर्छ जस्तो लाग्यो । अनि, पुलिसमा कन्ट्याक्ट गरेर जिम्मा लगाएँ ।
मलाई धेरै म्यासेजहरु आइरहेको छ । ट्याग गर्ने, कमेन्ट गर्ने अनि गालीगलौजहरु भइरहेको छ । क्यारेक्टरमै प्रश्न उठाइएको छ र थ्रेटसमेत आएको छ । सबैले एउटा भिडियो क्लीप हेरेर मूल्यांकन गर्नुभयो । त्यसमा एउटा साइडमात्र देख्नुभएको छ । त्यो हेरेर मलाई गाली गर्नुभएको हो । अहिले नोटिफिकेसन नै अफ गरेर बसेको छु ।
यो केस अगाडि बढोस् भन्दा पनि योबाट उहाँले केही पाठ सिक्नुहोस् भन्ने मेरो कुरा हो । यस्तो कसैलाई पनि नदोहोरियोस् । आधी क्लीपहरुमात्रै सेयर गरेर जतिले मलाई गाली गरिरहनुभएको छ, उहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु कि आफ्नो दिदीबहिनीलाई यस्तो पर्दा आवाज उठाउन सिकाउनुहोला । आफ्नो दाजुभाइलाई पनि यस्तो अभद्र व्यवहार नगर्न भन्नुहोला ।
हामी दर्शकलाई परिवार सम्झिन्छौं । त्यसैले सेक्युरिटीविनै जान्छौं । अब चाहिँ यसमा केही सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । गुड टच र ब्याड टचको सचेतना बढाउनुपर्छ । अहिले त्यो व्यक्तिले आफ्नो लुगाको फाइदा उठाएको हो नि त ! लामा भेषमा हुँदा कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने हो कि ? एउटा व्यक्तिको नियतको कुरा हो ।
सो अन्तर्वार्तामा अभिनेता सौगात मल्लले पनि मिरुनाको भनाइमा साथ दिएका छन् । आफूलाई पनि सो घटना याद रहेको भन्दै उनले युवकको कपडाको कारणले गर्दा त्यहाँ ठूलो रियाक्सन नभएको बताएका छन् ।‘उहाँको कपडालाई सबैले रेस्पेक्ट गरेकाले उहाँ बच्नुभएको हो । तर, जे गल्ती गर्नुभएको छ । त्यसको (सजाय) भोग्नुपर्छ’, सौगातले भनेका छन् । उनले अबदेखि हलमा दर्शकसँग फिल्म हेर्न जाँदा तयारीका साथ जानुपर्ने पनि बताएका छन् ।
दुर्घटना भएको तारा एयर जहाजका पाइलट उत्सव पोखरेलको बहिनीले दाईलाई लेखिन मन छुने स्टाटस
जी–बब र बुबाआमाबीच भयो यस्तो सहमति
June 14, 2022 mithokhabar